Wararka - Maxaa Looga Raadiyaa La Socodka Ciyaaraha
Maxaa laga raadsadaa kormeeraha ciyaaraha
Gamers, gaar ahaan kuwa adag, waa dad aad u feejigan, gaar ahaan marka laga hadlayo xulashada kormeeraha saxda ah ee qalabka ciyaarta. Marka maxay raadinayaan markay wax iibsanayaan?
Baaxadda iyo Xallinta
Labadan dhinac waxay is barbar socdaan oo had iyo jeer waa kuwa ugu horreeya ee la tixgeliyo ka hor intaadan iibsan kormeeraha. Shaashad ka weyn ayaa hubaal ka fiican marka aad ka hadlayso ciyaarta. Haddii qolku u oggolaado, dooro 27-incher si aad u siiso hanti badan oo ma guurtada ah oo loogu talagalay kuwa sawirada indha-indheynta ah.
Laakiin shaashad ballaaran ma fiicnaan doonto haddii ay leedahay xallin xurguf leh. Ujeeddo ugu yaraan shaashad HD dhammaystiran (qeexitaan sare) leh 1920 x 1080 pixels xalka ugu badan. Qaar ka mid ah kormeerayaasha cusub ee 27-inji ah ayaa bixiya Qiyaasta Sare ee Wide Quad (WQHD) ama 2560 x 1440 pixels. Haddii ciyaarta, iyo qalabkaaga wax lagu ciyaaro, ay taageeraan WQHD, waxaa lagugu daaweyn doonaa xitaa sawiro ka fiican kan HD buuxa. Haddii lacagtu aysan ahayn arrin, xitaa waad tegi kartaa Ultra High Qeexid (UHD) oo siineysa 3840 x 2160 pixels oo ah muuqaal muuqaal ah. Waxa kale oo aad kala dooran kartaa shaashad u dhiganta 16: 9 iyo mid leh 21: 9.
Cusboonaysii Heerka iyo Pixel Response
Heerka dib u cusbooneysiinta ayaa ah inta jeer ee kormeeraha uu ku qaato dib u soo celinta shaashadda ilbiriqsi. Waxaa lagu cabiraa Hertz (Hz) oo tirooyinka sareyso micnaheedu waa sawirro aan yareyn. Inta badan kormeerayaasha sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa lagu qiimeeyaa 60Hz taas oo wanaagsan haddii aad wax uun ka qabanayso xafiiska. Ciyaartu waxay dalbaneysaa ugu yaraan 120Hz jawaab celin dhaqso leh waana shardi haddii aad qorsheyneyso inaad ciyaarto ciyaaro 3D ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa kormeerayaasha ku qalabaysan G-Sync iyo FreeSync oo bixiya iswaafajin leh kaararka sawirada la taageerayo si loogu oggolaado heerar cusbooneysiin isbeddel ah xitaa khibrad ciyaar fudud. G-Sync wuxuu ubaahan yahay kaarka sawirada ee ku saleysan Nvidia halka FreeSync ay taageerto AMD.
Jawaabta pixel-ka kormeeraha ayaa ah waqtiga uu pixel ka gudbi karo madow illaa caddaan ama hal hadh oo cawl ilaa mid kale. Waxaa lagu cabiraa millisekonds iyo tirooyinka hoose ee ugu dhakhsaha badan waa jawaabta pixel. Jawaabta degdega ah ee loo yaqaan 'pixel pixel' waxay kaa caawineysaa yareynta pixels ghost ah oo ay sababaan sawirro dhaqso ah oo dhaqaaqa ah oo lagu soo bandhigo kormeeraha taasoo u horseedaysa sawir sahlan Jawaabta ugu fiican ee pixel ee ciyaarta waa 2 millisekonds laakiin 4 milliseconds waa inay fiicnaadaan.
Teknolojiyada Guddi, Waxyaabaha Fiidiyowga, iyo Kuwa Kale
Nematic-ga Twisted Nematic ama TN waa kuwa ugu raqiisan waxayna bixiyaan sicirro dhakhso leh oo cusbooneysiin iyo jawaabta pixel taasoo ka dhigeysa inay ku habboon yihiin ciyaarta. Si kastaba ha noqotee ma bixiyaan xaglo aragti ballaaran. Is-waafajinta Vertical ama VA iyo In-Plane Switching (IPS) ayaa laga yaabaa inay bixiyaan isbarbardhigyo sare, midab aad u fiican, iyo xaglo ballaadhan oo ballaadhan laakiin waxay u nugul yihiin sawirrada cirfiidka iyo astaamaha dhaqdhaqaaqa.
Kormeere leh waxyaabo badan oo fiidiyow ah ayaa ku habboon haddii aad isticmaaleyso qaabab badan oo ciyaaro ah sida qunsuliyadaha iyo kombiyuutarada. Meelo badan oo HDMI ah ayaa fiican haddii aad u baahato inaad u kala beddesho ilo fiidiyoow badan sida tiyaatarka gurigaaga, qalabka ciyaarta, ama qalabkaaga ciyaaraha. DisplayPort sidoo kale waa la heli karaa haddii kormeerahaagu uu taageero G-Sync ama FreeSync.
Kormeerayaasha qaarkood waxay leeyihiin dekedo USB ah oo loogu talagalay filim toos ah iyo sidoo kale kuwa ku hadla subwoofer oo loogu talagalay nidaam ciyaaro oo dhameystiran.
Waa maxay qiyaasta kormeeraha kumbuyuutarka ee ugu fiican?
Tani aad ayey uguxirantahay xalka aad bartilmaameedsaneysid iyo inta miis aad leedahay. In kasta oo ka weyni u muuqdaan kuwo si fiican u muuqda, oo ku siinaya meelo badan oo shaashad ah oo loogu talagalay shaqada iyo sawirro waaweyn oo loogu talagalay cayaaraha iyo filimada, waxay ku kala bixin karaan go'aannada heerka gelitaanka sida 1080p illaa xadka xaddidan. Shaashadaha waaweyn sidoo kale waxay u baahan yihiin qol badan oo miiskaaga ah, sidaa darteed waxaan ka taxadaraynaa inaan soo iibsanno Ultrawide aad u ballaaran sida JM34-WQHD100HZ ee liistadayada wax soo saar haddii aad ka shaqeyneyso ama aad ku ciyaareyso miis weyn.
Sida ugu dhakhsaha badan ee suulka, 1080p wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican ilaa kudhowaad 24 inji, halka 1440p u muuqdo mid wanaagsan ilaa iyo in kabadan 30 inji. Kuma talin lahayn shaashadda 4K wax ka yar 27 inji maadaama aadan arki doonin faa iidada dhabta ah ee pixels-yadaas dheeraadka ah ee ah meel aad u yar qaraarkaas.
4K kormeerayaashu ma ku fiican yihiin ciyaarta?
Waxay noqon karaan. 4K wuxuu bixiyaa meesha ugu sarreysa ee faahfaahinta ciyaaraha iyo cayaaraha jawiga wuxuu ku siin karaa heer cusub oo dhammaystiran, gaar ahaan bandhigyo waaweyn oo si buuxda u soo bandhigi kara tiradaas pixels-ka sharaftooda oo dhan. Bandhigyadan sare-sare waxay runtii sifiican ugu ciyaaraan ciyaaraha halkaasoo heerarka qaabdhismeedyadu aysan muhiim u ahayn muuqaalka muuqaalka. Taasi waxay tiri, waxaan dareemeynaa in kormeerayaasha heerka cusbooneysiinta sare ay bixin karaan khibrad fiican (gaar ahaan cayaaraha xawaaraha ku socda sida kuwa wax toogta), iyo inaad jeebado qoto dheer aad ku daadiso kaar garaaf ah ama laba sidoo kale, ma tihid waxay helayaan sicirradaas jir ahaan 4K. Muuqaal 27-inch, 1440p ah ayaa wali ah barta macaan.
Sidoo kale maskaxda ku hay waxqabadka kormeerka maskaxda ayaa hadda inta badan lala xiriiriyaa tikniyoolajiyada maareynta qaabdhismeedka sida FreeSync iyo G-Sync, haddaba u fiirso teknoolojiyadaan iyo kaararka sawirada iswaafaqsan markaad sameyneyso go'aamada kormeerka ciyaarta. FreeSync waxaa loogu talagalay kaararka sawirada ee AMD, halka G-Sync kaliya uu la shaqeeyo GPU-yada Nvidia.
Kee baa fiican: LCD ama LED?
Jawaabta oo kooban waa labaduba waa isku mid. Jawaabta dheer ayaa ah in tani ay tahay mid ku fashilantay suuqgeynta shirkadda inay si habboon u gudbiso waxyaabaha ay yihiin. Maanta kormeerayaasha intooda badan ee adeegsada tikniyoolajiyadda LCD waxay gadaal ka iftiimiyaan laydhadhka, sidaas darteed caadi ahaan haddii aad iibsanayso kormeere waa labadaba bandhig LCD iyo LED ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan LCD iyo teknoolojiyada LED-ka, waxaan haynaa hage dhan oo loogu talagalay.
Taasi waxay tiri, waxaa jira bandhigyo OLED ah oo la tixgelinayo, in kasta oo kumbuyuutarradu aysan weli wax saameyn ah ku yeelan suuqa desktop-ka. Shaashadda OLED waxay isku daraan midabka iyo iftiinka hal guddi, oo caan ku ah midabbada firfircoon iyo saamiga farqiga u dhexeeya. In kasta oo tiknoolajiyaddu ay mowjado ka sameyneyso telefishinnada dhowr sano hadda, waxay kaliya bilaabeen inay tallaabo horudhac ah u qaadaan adduunka kormeerayaasha desktop-ka.
Waa maxay nooca kormeerka ee ugu fiican indhahaaga?
Haddii aad ka cabanayso culeyska isha, raadi kormeerayaal leh qalab casri ah oo lagu nadiifiyo iftiinka, gaar ahaan miirayaasha si gaar ah loogu talagalay in lagu fududeeyo dhibaatooyinka indhaha. Miirayaashaan waxaa loogu talagalay inay xayiraan nal badan oo buluug ah, taas oo ah qaybta muuqaalka saameysa indhaheena inta badan waxayna mas'uul ka tahay inta badan dhibaatooyinka culeyska indhaha. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa barnaamijyada softiweerka miiraha indhaha nooc kasta oo kormeere ah oo aad hesho